မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths VII
Posted by Kyaemon on May 31, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different | 18 comments
Dams Myitsone Myths Truths
ပဉ္စမ မေးခွန်းနဲ့ဆဋ္ဌမ မေးခွန်းအတွက် အဖြေရှာဘို့ဘဲကျန်တော့တယ်၊
၎င်းမေးခွန်းတွေကို ပြန်lသတိရအောင် အောက်မှာထပ်ဖော်လိုက်ပါတယ်၊
အဖြေတွေက အပြန်အလှန် အကျိုးပြု ဆက်နွယ်နေလို့ အမှတ်စဉ် ရ က စပြီး
ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအားထုတ် ရေကာတာတွေက မြန်မာနိုင်ငံအတွက်
အကျိုးမပေး သူမြားနိုင်ငံကိုဘဲအကျိုးပေးတယ် ဆိုတာမှန်ကန်
လားအိုးပြည်သူတဦးချင်းရဲ့ဝင်ငွေကမြန်မာထက် နှစ်ဆခွဲ မက
အမေရိကန် ရေကာတာအကြောင်းနဲ့စ ကြစို့၊
ဘာဖြစ်လို့ အကြီးစားရေကာတာ လုံးရေ ၈၀၉၂ (ရောကျော် ၈၀၀၀ဝ ခန့်) တောင်
ရေကာတာတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၅ဝ နဲ့ အနှစ် ၁၀ဝ ကျော် က ဘာ ကြောင့်
ဒီရေကာတာ တွေက အမေရိကန်ကို စက်မှုထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်ပန့်ပိုးပေးပြီး
အောက်ကမြေပုံတွေကိုကြည့်ပါ၊ အစက် တစက် ဆိုရင် ရေကာတာ အကြီးတလုံးပါ၊
ရေကာတာ တွေကများလွန်းအားကြီးလို့အစက်တွေကမှိုလိုပေါက် လို့ဘဲ၊
(ရှင်းနေတာဘဲဟာ၊ အကျိုးရှိလို့ပါ၊ ဆိုးကျိုးဖြစ်ရင် ဒီလောက်တောင်လုပ်မလား
တလုံးတလေ ဖြစ်မှာပေါ့၊ ဆိုးကျိုးပေးရင် ဖြိုပစ်ခွါပစ်မှာ ကြာပြီပေါ့၊)
Let’s start with good old USA.
Why did USA have 8092 large dams in 50 states?
Why were the dams built long time ago? 50 to 100 years or more.
Did the dams not contribute to USA becoming an industrial giant
andagreat power to this day?
Just look at the map (below with links) with the dots. Each dot isalarge dam.
ဘာကြောင့် ဒီရေကာတာတွေကိုယနေ့ထိ ဆက်လက်ပြီး ထိန်းသိမ်းမွန်းမံ
Were the dams built by BAD western leaders?
Why wd they continue to build and maintain to this day?
If that bad, why don’t they take them (at least most of them)
apart even now?
ကိုယ့်ဆီက ရေကာတာဟောင်းတွေတော်တော်များ တယ်၊ စံချိန်မမှီတာကို
အပြစ်တင်ဝေဖန်ဘို့အခွင့်အလမ်းအများကြီးပါ၊ NGO တွေကဒီအကြားမှာ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးဖွံ့ဖြိုးစ နိုင်ငံတွေ က ရေကာတာတွေကိုလုပ်ကြံပြီး ဝေဖန်လှုံ့ဆော်
Why won’t the Western NGO’s and environmentalists pick on their own
dams ….which are so numerous?
Why wd they concentrate on the poorer and developing countries and
stir up all the populace?
မြတ်စွာဘုရားက ကလာမသုတ် မှာဟောကြားခဲ့သလို ချင့်ချိန်ပြီးမှယုံ
Inquiring minds want to know (and should know). Yes, Lord Buddha
would want you to think deeply first.
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း တရာ မှာဆိုရင် အမေရိကန်က ရေကာတာ
ဆောက်လုပ်ရေး မှာ ရှေ့ဆောင်ခဲ့
Over the past 100 years, the United States has led the world in dam building – blocking and and harnessing rivers foravariety of purposes, including hydropower, irrigation, flood control, and water storage. The US Army Corps of Engineers has catalogued
at least 80,000 dams greater than6feet along the waterways of the United States – and
at least tens of thousands of smaller dams pepper our rivers and streams.
အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ (၁၇၇၆ ဇူလိုင် ၄)
ကစပြီး (အနှစ် ၂၄၀ နီး ၂၄ဝပါး ကာလမှာ) တနေ့ကိုရေကာတာတလုံး တည်
ဆောက်ခဲ့တယ် လို့ အမေရိကန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး Bruce Babbitt ကမိန့်ကြားခဲ့
Secretary of the Interior Bruce Babbitt recently observed that, “on average, we have constructed one dam every day since the signing of the Declaration of Independence.”
အမေရိကန်မှာ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်တွေက ၇၅၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ တပြည်လုံးရဲ့မြစ်ရေ ၁ရ % ကိုယူသုံးကြတယ်၊
….The following isapartial list of dams and reservoirs in the United States. There are an estimated 75,000 dams in the United States, impounding 600,000 mi (970,000 km) of river or about 17% of rivers in the nation.,,,, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dams_and_reservoirs_in_United_States
File:Dams in the United States 2006.svg – Wikipedia, the…
Projection: “+proj=aea +lon_0=110w +lat_1=36N +lat_2=49 +datum=WGS84 +ellips=WGS84”
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ရေကာတာ အကြီးစား ၈၁၀ဝ လုံးရေ နီးပါးရှိတယ်၊ အကြီးစား ဆိုတာ ၅ဝ ပေအမြင့်ရှိပြီး ၅၀၀ဝ ဧက ပေ ထုထယ်ပမာဏရှိတဲ့ ရေကိုသိုလှောင်နိုင်ရမယ် ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်ရာ အမြင့် နဲ့ ၂၅၀၀ဝ ဧက ပေ ရှိရေထုကို သိုလှောင်နိုင်ရမယ်
The nearly 8100 major dams in the United States in 2006. The National Inventory of Dams definesamajor dam as being 50 feet (15 m) tall withastorage capacity of at least 5,000 acre feet (6,200,000 m3), or of any height withastorage capacity of 25,000 acre feet (31,000,000 m3).
8092 dams in 50 states Information from the National Atlas of the United States, dated 2006.: The National Inventory of Dams (NID) isacollection of information about dams in the United States and its territories, produced by the U.S. Army Corps of Engineers (USACE).
အမျိုးသား ရေကာတာ မှတ်တမ်း ဌာန အရ ရေကာတာ ၇၉၀၀၀ လုံး ကျော်ရှိကြောင်းပြော ရေကာတာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး၊ ခရီးသယ် လုပ်ငန်း၊
အပန်းဖြေလုပ်ငန်း နဲ့ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပါ အလုပ်ဖြစ်လို့ အောင်မြင်နေတဲ့ ပုံတွေပါ တင်ပြထား၊
The USACE works closely with the Association of State Dam Safety Officials (ASDSO), the Federal Emergency Management Agency, and other State and Federal agencies to update and publish the NID. The National Inventory of Dams contains more than 79,000 dams,
Major dams include dams 50 feet or more in height, dams withanormal storage capacity of 5,000 acre-feet or more, and dams withamaximum storage capacity of 25,000 acre-feet or more. Descriptive information includes the dam name and location, the risk level associated with the dam, the purposes for which the dam was constructed, and the dam type.”
အမြင့်ဆုံး ၁ဝ လုံး ကိုအောက်မှာစီပြထားပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ပုံတွေ နဲ့အကြောင်းတွေကို ရွေးနုတ် တင်ပြထားတယ်၊
Hoover Dam – Wikipedia, the free encyclopedia
Photos: The Construction of Hoover Dam | Plog — World, National Photos, Photography and Reportage — The Denver Post
The Story of Hoover Dam, complete video
Hoover Dam . American Experience . WGBH | PBS
အမေရိကန် လွှတ်တော် နဲ့သမတ အဆက်ဆက်က
ဥပဒေတွေကို ဘာဖြစ်လို့ထုတ်ပြန် ပြဋ္ဌန်းရသလဲ စဉ်းစာစရာ၊
မကောင်းဘူးဆိုရင် ဘာပြုလို့ ဒေါ်လာ ငွေသန်းချီ သုံးစွဲ ခွင့်ပြုကာ
If Building Dams is or was bad, why would US Congress and past US Presidents
enact laws and use millions in funds and hireahuge work force to build dams like
the great Hoover Dam?
Hoover ရေကာတာ တည်နေရာ Boulder City နဲ့Las Vegas မြို့ ရထားလမ်း ခင်း ဖြစ်လို့လမ်း ဖွင့်ပွဲ
အခမ်းအနား၊ ရေကာတာ စ မလုပ်ခင် ပစ္စည်း ထောက်ပို့သယ်ဆောင်ဘို့ရထားလမ်းလိုအပ်
MegaStructures Hoover Dam (National Geographic Documentary)
Dworshak Dam isaconcrete gravity dam in the western United States, on the North Fork Clearwater River in Clearwater County, Idaho. The dam is located approximately4miles (6 km) northeast of Orofino and impounds the Dworshak Reservoir for flood control and hydroelectricity generation. Withaheight of 717 feet (219 m), Dworshak is the third tallest dam in the United States
Glen Canyon ရေကာတာ
ခရီးသွား ဧည့်သယ် အတွက် အပန်းဖြေစခန်းနဲ့ဝင်ငွေရ
ဧည့်သယ်က နှစ်စဉ် ၂ သန်း၊ရှိ
Glen Canyon National Recreation Area draws more than two million visitors annually. Recreational activities include boating, fishing, waterskiing, jet-skiing, and hiking. Prepared campgrounds can be found at each marina, but many visitors choose to rentahouseboat or bring their own camping equipment, findasecluded spot somewhere in the canyons, and make their own camp (there are no restrictions on where visitors can stay).
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရေကာတာကြီး ၁၄၀ဝ လုံး ဆည်ကြီး ၁၃၀ဝ လုံး
ပေါင်း ၂၇၀ဝ လုံး ရှိတယ်၊
အမေရိကန်ကအမြင့်ဆုံး ရေကာတာ ၁ဝ လုံး အနက် ၆ လုံး က
San Andreas ငလျင်ကျောက ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ရှိတယ်နော်
There are over 1,400 named dams and 1,300 named reservoirs in the state of California.
စစ်ကိုင်းမြေငလျင်ကျော ထက် များစွာ ထူထပ်ရှည်လျားပြင်းထန်တဲ့San Andreas မြေငလျင်ကျော
ကြီး က ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ တည်ရှိတယ်၊
သို့လင့်ကစား ကယ်လီဖိုးနီးယားက ရေကာတာ နဲ့ ဆည် ကြီးတွေ ၂၇၀ဝ လုံး
ရှိလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိတာထက် အဆပေါင်းများတယ် ဆိုတာ လယ်ပေါ်မှာဆင်သွား
ရေရှားချိန်မှာ ရေကာတာဆည်တွေထပ်လုပ်ဘို့ဘို့ စီစဉ်နေတယ်၊
နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ ဘက်စလုံး ရော အရပ်သား ကပါလိုလားကြတယ်၊
လျှပ်စစ်အား အပြင် စိုက်ပျိုးရေး နဲ့သောက်သုံးရေတွေ အတွက်ပါ
လိုလား ကြ တယ်၊
အလယ်ပိုင်းမြန်မာပြည်လိုခြောက်သွေ့ပြီး သဲကန္တ္တာရ တပိုင်း ဖြစ်နေ
ခြံတွေ တော်တော်အောင်မြင်တယ်၊ တရုပ် ဂျပန် ကမ႓ာအနှံ့ဆီတင်ပို့
ကယ်လီဖိုးနီးယား အကျယ်အဝန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၆၃ %
သို့သော် ရေကာတာ ၁၄၀ဝ လုံး ဆည် ၁၃၀ဝ လုံး (ပေါင်း
၂၇၀ဝ လုံး) ဆိုတော့ မြန်မာ က လွန်စွာမှ နဲနေတာပါ၊
မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကိုင်း ငလျင် ကျောက ကယ်လီဖိုးနီးယား
က San Andreas လောက်လဲမပြင်းထန် ပိန်ညောင်လေးပါဘဲ၊
New Bullards Bar Dam Significantly shorter than the Oroville Dam, the New Bullards Bar Dam in Yuba County was completed in 1970 and stands an impressive 635 feet tall. Built across the North Yuba River, the variable radius arch concrete structure providesareservoir capacity of 969,900 acre-feet andadrainage area of 481 square miles. Like the Oroville Dam, New Bullards Bar generates power, drinking water, flood control and irrigation for the surrounding communities.
Don Pedro ရေကာတာ
New Don Pedro Dam At 580 feet, the New Don Pedro Dam was completed in 1971, replacinga1923 structure. The first dam hadaminimal 289,000 acre-feet capacity, while the newer dam’s capacity totals 2,030,000 acre-feet and provides water for crop irrigation on 5,800 farms, power generation, flood control and public recreation. The earth embankment dam spans the Tuolumne River in Tuolumne County.
New Melones Dam This earth and rockfill structure, managed by the U.S. Bureau of Reclamation, measures 625 feet tall and spans the Stanislaus River on the boundary between Calaveras and Tuolumne counties. The dam, completed in 1978, replaced the older Melones dam,a183-foot tall structure that is now submerged under the New Melones Lake reservoir, which hasacapacity of 2.4 million acre-feet. Primarily, the New Melones Dam provides flood control for communities in the central Sierra Nevada foothills; an adjacent power plant downstream from the dam generates electricity for the equivalent of 72,000 households.
Oroville Dam Not just California’s tallest dam, the Oroville Dam in Butte County is also the largest dam in the United States at 742 feet, according to the state’s Division of Safety of Dams. Completed in 1968, the massive earth fill structure spans the Feather River and serves three main purposes: hydropower generation, flood control and irrigation in surrounding communities. The Oroville Dam also manages an incredible amount of water; its full capacity measures 3,537,577 acre-feet, and it boastsadrainage area of 3,607 square miles.
Shasta Dam The 602-foot Shasta Dam, on the Sacramento River in Shasta County, boasts several similarities to America’s largest dam outside California — the Hoover Dam. Like its Nevada cousin, the Shasta Dam isacurved gravity concrete structure; upon its completion in 1945, it ranked asacivil engineering triumph due to its continuous pour concrete construction. Shasta Lake, the resulting man-made reservoir withacapacity of 4,552,000 acre-feet, isapopular recreation area. Shasta Dam is managed by the U.S. Bureau of Reclamation and generates hydroelectric power for northern California.
ရေသိုလှောင် အကျယ်အဝန်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Oroville 3,537,577 acre = ၅၅၂ရ စတုရန်းမိုင်
Hoover 28,537,000 acre= ၄၄၅၈၉ စတုရန်းမိုင်
Dworshak 3468000 acre = ၅၄၁၉ စတုရန်းမိုင်
Glen Canyon 26214900 acre= ၄၀၉၆၁ စတုရန်းမိုင်
Don Pedro 2,030,000 acre = ၃၁၇၂ စတုရန်းမိုင်
မြစ်ဆုံရေကာတာ ၁၆၈၂၅ စတုရန်းမိုင်
ဖော်ပြပါအမေရိကန် ရေကာတာ ၅ လုံး ရဲ့ရေသိုလှောင်မှု
အကျယ်အဝန်းTotal Capacity ပေါင်း၉၉,၆၆၈ စတုရန်းမိုင်
ဖျမ်း မျှ အားဖြင့် Total Capacity ၁၉,၉၃၄ စတုရန်မိုင် ဖြစ်ပြီး
မြစ်ဆုံရေကာတာ ကျတော့ ရေသိုလှောင်မှုက Total Capacity
၁၆၈၂၅ စတုရန်မိုင် ဆိုတော့ ၈၄.၄၀% ဘဲ ရှိတယ်၊
၎င်းဖျမ်း မျှရဲ့ ၆ချိုး အနက်၅ချိုး သာ၊
အထက်ပါ အမေရိကန် ရေကာတာ တွေနဲ့စာရင် ရေ “ယူပြီး”
သုံးတာ က မ ပြော ပလောက်ပါ
Oroville 1490 gwh
(၁၄၉ဝ Gwh = ၁၄၉၀၀၀ဝ kwh = ၁.၄၉ billion Kwh
Hoover 4.2bkwh ၄.၂ billion Kwh
Dworshak 1.693bkwh ၁.၆၉၃ billion Kwh
Glen Canyon 3.46bkwh ၃.၄၆ billion Kwh
Don Pedro 0.618bkwh ဝ.၆၁၈ billion Kwh
မြစ်ဆုံ ၃၀.၈၆ billion Kwh
(ယခင်က Dworshak ရေကာတာ ထုတ်တဲ့ ဓာတ်အားပမာဏ ကိုကူးယူ
တာလွဲမှားသွားတယ်၊ ၁,၆၉၃ နဲ ၁.၆၉၃ Comma ပုဒ်တချောင်း နဲ့
Decimal point “ဒသမ” ကသေးတော့ အကူးမှားတာကိုတောင်းပန်ပါတယ်၊
ဖော်ပြပါ အမေရိကန်ကရေကာတာကြီး ငါးလုံး စလုံးတို့ထက်
မြစ်ဆုံက နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း လျှပ်စစ်အင်အား ပိုမို ထုတ်ပေးနိုင်တယ်
အနဲဆုံး ဆို ရ ဆ ၁ဝ ဆ လောက် ကို ထုတ်ပေးနိုင်တယ်
ဖော်ပြပါအမေရိကန် ရေကာတာ ၅ လုံး ထုတ်လျှပ်စစ် အင်အား ၁၁.၄၆၁ billion KWh
ဖျမ်း မျှ ၂.၂၉ billion KWh
မြစ်ဆုံရေကာတာ ထုတ်နိုင်မဲ့ လျှပ်စစ် အင်အား ၃၀.၈၆ billion KWh ဆိုတော့
လက်ဖျား ခါလောက်အောင်အင်မတန် စွမ်းမဲ့မြစ်ဆုံ ရေကာတာ
သူမတူအောင်အကျိုးပြုမဲ့ရေကာတာ လို့ဘဲ ပြောရမှာပါ၊
ရေကာတာ ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာ
တို့ထက် တရုပ်က သာလွန်ပြီး ရှေ့ပြေးနေတာကို တချို့က မ မြင်သေး
ကယ်လီဖိုးနီးယားက ရေကာတာ အကြီးနောက်ထပ် ၄ လုံး
လုပ်ဘို့ ၂၀၁၄ ကစီစဉ်နေ
မြန်မာရေကာတာ ၂၈ လုံး
ကယ်လီဖိုးနီးယားက ၂၇၀ဝ လုံး
ဆိုတော့ (၁.၀၀) % ဘဲ
အကျယ်အဝန်း ၆၃ % ဘဲ ရှိပေမဲ့
ရေကာတာ လုံးရေ က ၉၆ ဆ ကြီး
သဘာဝ ပျက် တာ၊ငလျင်တို့အကြောင်းတွေကို
NGO တွေကဘယ်သွားပြော ဝံ့မလဲ?
4 huge dam projects that could become California realities
Four large dam projects are under consideration in California, selected by state and federal officials in 2000 out of 50 potential sites. Proposition 1,awater bond approved by voters last fall, allocates 40 percent of its funds, $2.7 billion, to storage. It could pay up to half the cost of new projects.
၁၉၂၉ ခုနှစ် က အစုရှယ်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုလက်မှတ်တွေ တန်ဘိုးအကြီးအကျယ်ကျဆင်းပြီး
နောင် နှစ်တွေမှာ တကမ႓ာလုံးက စီးပွါးရေးကပ်ဆိုက်တော့တယ်၊
အမေရိကန် ကလဲ အတော်ဘဲခံလိုက်ရတယ် (ပုံ တွေကြည့်ပါ)၊
လူတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကာ တန်းစီပြီး အကူအညီတောင်းတယ်၊ဆန်ပြုက်တောင်းယူရတယ်၊
အလုပ်တောင်းကြတယ်၊ အလုပ်လိုချင်တယ်ဆိုပြီး ကပ်ပြားချိတ်စွဲတယ်၊
ဆန္ဒ ပြကြတယ်၊ ဘဏ်တိုက်မှာငွေထုတ်ဘို့တန်းစီကြတယ် (ဘဏ်တိုက်ငွေတွေ
ကယ်လီဖိုးနီးယားဘက်ကို မိသားစုလိုက် ကားမောင်းကာ နယ်ပြောင်းကြတယ်၊
(ငါတို့မြို့မှာလဲဒုက္ခပါ) ဆက်သာ မောင်းပါနော် ဆိုင်းဘုတ်နဲ့၊
ရေ ခမ်းနေတဲ့ ဆည်ဟောင်းမှာ အိမ်ခြေမဲ့သူတွေက နှင်းတွေအကြားမှာ
တပတ်ကို ၂၅ ဒေါ်လာ ၂၆ ပတ် အလုပ်ကို လိုလိုချင်ချင်နဲ့လက်ခံကြသူတွေ၊
စားစရာမရှိတော့ ကလေးရင်သွေး ၄ ဦးရောင်းမယ် အထဲဝင် မေးပါ ဆိုပြီး
ကမ႓ာ မှာလူနေမှုအဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံး ဆိုထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ် အောက်မှာ
ထောက်ပံ့ကြေးရဘို့ လူတွေတန်းစီကြပုံ တွေကို မယုံနိုင်လောက်အောင်တွေ့ရတယ်။
ဒီအတောအတွင်း လူတွေကို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလုပ်ပေးရတယ်၊
ဟူဗာရေကာတာ စတဲ့ရေကာတာ လုပ်ငန်းမှာအလုပ်ပေးကြတယ်၊
ဒါနဲ့ဒုတိယ ကမ႓ာ စစ်ကြီးရောက်တော့ အမေရိကန် က စစချင်း မှာ မ ပါ ဝင်တဲ့
အပြင် ရူရှား နဲ့အင်္ဂလိပ် တို့ကိုစစ်လက်နက်တွေ ခဲယမ်းမီးkကျောက်တွေ၊စစ်
လေယာဉ်တွေ၊တန့်ကားတွေ၊စစ်သင်္ဘောတွေ ရောင်းရလို့ ချမ်းသာလာ၊
သံယန်ဇာတ ကျောက်မီးသွေး၊သံသတ္တု၊လူအင်အား နဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖူလုံတာ
ကြောင့် နောက်ဆုံးကျတော့ ဟစ်တလာ တို့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့က ရေရှည်တိုက်ပွဲမှာ မ ခံနိုင်
နေမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ ဘိန်းအတင်းရောင်းစားသူ အင်္ဂလိပ် အင်ပိုင်ယာနယ်ချဲ့ ကလဲ တန်ခိုးမှေးမှိန် ဆင်းရဲ
သင်္ခဏ်းစာ၊ ရေအားမှ လျှပ်စစ်အား ရရင် စက်ရုံ လည်ကြမယ် လူတွေ အလုပ်ရအောင်
အထောက်အကူတရပ် လိုအပ်ချက် တရပ် ဖြစ်တယ်၊
အလုပ်ရှာမရလို့ နိုင်ငံခြားမှာသွားလုပ်ရ ပြီး အနှိပ်စက်ခံရတဲ့ပြသနာတွေလဲ နဲပါးသွားနိုင်တယ်၊
အိန္ဒိယက အရာကြီးတွေကလဲ “အ” လို့ ရေကာတာလုပ်နေတာ လို့ပြောရမလား၊
Why would India be foolish enough to build dams?
ဆင်းရဲတဲ့ ဒုက္ခသယ်တွေကိုမကူဘဲနဲ့ ဘာပြုလို့ အိန္ဒိယ ခေါင်ဆောင်တွေ
နဲ့အင်ဂျင်နီယာ တွေ က အကြီးစားရေကာတာ ဆောက်တည်ဘို့ငွေတွေကို
Were Indian leaders and engineers, also foolish enough to waste
millions in building large dams? (when people were poor and destitute)
အားမာန်တဖန်တက်ကြွလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ အတွက်( မြတ်နိုးထိုက်တဲ့) ဘုရားကျောင်းတော်
သစ်တွေပါ ဆိုပြီး ဝန်ကြီးcချုပ်နေရူးက၎င်းရဲ့မိန့်ခွန်းမှာ ရေကာတာ ကိုဘာပြူလို့
In his speech to the people, why did PM Nehru even describe dams as
“modern temples of resurgent India.”
World’s Longest Dam Inaugurated In India By Nehru Listed On Sleeve As World’s Longest Day (1957)
World’s Longest Dam Inaugurated In India By Nehru List…
Documentary film on Big Dams in India ( Part 1, Produced in 1999 – 2000)
၁၉၄၃ ခုတွင် အရှေ့ပိုင်း အိန္ဒိယ မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး ကပ်ဆိုက်ခဲ့ တာ က
ကမ႓ာ့မှတ်တမ်းမှာ ဆိုရင်အဆိုးဝါးဆုံး ဖြစ်ပြီး လူပေါင်း ၄ သန်း သေဆုံး ခဲ့တယ်၊
The world’s worst recorded food disaster happened in 1943, when an estimated4million people in eastern India died. At the time, people believed the Bengal Famine happened because India’s farmers could not produce enough food to feed everyone. Food security—ensuring sufficient food production to feedacountry’s people—became the Indian government’s biggest priority,
နှစ်သီးစာစိုက်ပျိုးခြင်း၊မျိုးစေ့ကောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးခြင်း၊ရေကာတာဆည်ကြီးတွေနဲ့ဆည်မြောင်းစံနစ် တိုးချဲရခြင်း ,,,,,,
တို့ကြောင့် ဆန်စပါး က ၃၅ဝ % ဂျုံ တွေက ၈၅ဝ % ထိ အောင်မြင်တိုးတက်လာတယ်
… Green Revolution and requiredasteady supply of water. To make this possible, the government began construction ofanetwork of large dams. Dams are able to conserve monsoons rains and irrigate crops all year, especially useful during the dry season.
In India, agriculture employs about two-thirds of the workforce and is the most important economic sector. Since the 1950s, there has beena2.5% average yearly increase in crop output, mostly due to yield—how much foodaplant or seed produces—and not to an increase in the amount of land being farmed. With the Green Revolution, the production of rice, the staple food of southeast India,
increased by 350% and the production of wheat, the staple in the northwest, increased nearly 850%.
Documentary film on Big Dams in India ( Part 2, Produced in 1999 – 2000)
တွေလုပ်ဘို့ ဘက်ကိုဘဲ အားသန်လာကြတယ်၊
…But today there isastrong push for large hydro projects in India.
Bhakra Nangal ရေကာတာကြောင့် Punjab နဲ့Haryaba ပြည်နယ်တို့က
အားကိုးရာ ထမင်းအိုး ကြီး (ပဒေသာပင်ကြီးလို)
The Bhakra Nangal dam …is said to have turned Punjab and Haryana into the nation’s bread baskets.
In addition to preventing destructive floods, this multipurpose project irrigates the agricultural areas of Delhi,Rajasthan, Punjab, Himachal Pradesh and Haryana. The project generates 1 million kilowatt of hydro-electricity.
The lake created by the dam isa97 km long,6km wide reservoir named Gobindsagar.Though located in Himachal Pradesh, the entrance to this dam is at Nangal in Punjab
Documentary film on Big Dams in India ( Part 3, Produced in 1999 – 2000)
Documentary film on Big Dams in India ( Part 3, Produced…
Documentary film on Big Dams in India ( Part 4, Produced in 1999 – 2000)
Documentary film on Big Dams in India ( Part 4, Produced…
ယူကေ ရဲ့အကျယ်အဝန်း ကအိန္ဒ္ဒိယရဲ့ ၇% သာရှိပြီး
ယူကေက ၂၀၀ဝ ကျော် အိန္ဒိယက ၄၀ဝ လောက်ဆိုတော့
ခုကြတော့ အိန္ဒိယ က ၄၀၀ဝ ကျော် ရှိလာ
Kyae Mon has written 715 post in this Website..
Likes to post news and educational items.
View all posts by Kyaemon →
ကေ ျာက်မီးသွေးဆိုလဲသဘာဝပ ျက်တယ်
န ျူကလီးယားဆိုလဲပတ်ဝန်းက ျင်ပ ျက်တယ်ဓါတ်ရောင်ခြည်သင့်မယ်နဲ့
အဲ၂ မ ျိုးကလဲစေ ျကခေါင်ခိုက်နေတာ
အခ ျိန်ပြည့်လှ ျပ်စစ်ရဖို့ကလဲမဖြစ်နုင်နည်းပညာကလဲမြင့်
ဓါတ်အားခစေ ျတက်တော့လဲစေ ျကြီးတယ်
အမြဲလှ ျပ်စစ်ရနိုင်ပြီးစေ ျခ ျိုတဲ့ရေအားက ျတော့လဲလက်မခံ
လူတိုင်းနေခ ျင်စားခ ျင်တာပေါ့
သူများ မေးတာတွေ ဖြေတာတွေဘဲ ထိုင်ကြည့်မယ်လေ
မြစ်ဆုံဆည်တည် ဆောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ နေရာမှာ မြစ်ဆုံဒေသ ကွက်ကွက်လေးကိုကြည့်
ပြီးမပြောနဲ့လေ ဆိုလိုတာက မြစ်ဆုံတစ်ဝိုက် ငလျင်ကြောကြောင့် ဆည်ပြိုမှာ ဆိုးတာတို့
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှာတို့ ဆိုတာလောက်နဲ့ မြစ်ဆုံကို တိုင်းတာလို့ မရဘူး
အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက (၁)တရုတ်ဖြစ်နေလို့ (၂)တရုတ်ဖြစ်နေလို့ (၃)တရုတ်ဖြစ်နေလို့
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တရုတ်ကုမ္မဏီတွေဟာ ဘယ်တုံးကမှ မြန်မာပြည်သူ
တွေအတွက် အကြိုးမရှိခဲ့လိုု့ဘဲ တရုတ်တွေက ကိုယ့်အကျိုး
ကြည့်လွန်းအား ကြီးတယ် သူတို့ကုမ္မဏီ တစ်ခုဝင်လာရင် ဟိုး….အပေါ်ဆုံး စီမံခန့်ခွဲ
သူကစပြီ အောက်ဆုံးမြေကျင်း တူးတဲ့သူတွေအထိ အကုန်ခေါ်လာတယ်
ထမင်းချက်ကအစ အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်က အလုပ်သမားက
အဲဒီတရုတ်တွေအတွက် အဝတ်လျှော် ကြမ်းတိုက် လောက်အဆင့်နဲ့
ရိုင်းရိုင်းပြောရင် တရုတ်တွေအတွက် ဖာခေါ်အဆင့်လောက်ဘဲ ရှိတယ်
ပြီးတော့အပြောအဆို အမူအရာကလည်း ရိုင်းသေး
အဲဒီလို တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိတဲ့ ကုမ္မဏီတွေကို
Case by case ပဲ..
ဆည်ဆောက်သင့်တယ်.. ဆောက်ရမယ်ဆိုတာက… တခု…။
အခုCase က.. ဆည်ဆောက်သင့်တယ်ဆိုတာ.. ရှင်းပြနေတာလို့ယူဆပါတယ်..။
ဒါကို.. အိုကေတယ်ဆိုရင်… ဆည်ကိုဘယ်သူဆောက်သင့်တယ်..။ ဘယ်လောက်ရသင့်တယ်ဆက်ဆွေးနွေးရမှာပါ…။
ဒီလိုအခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်တော့.. နိုင်ငံရေးသမားတွေအလုပ် တည့်တည့်ကျပြီပေါ့…။
လာဘ်မစားတဲ့.. ပွင့်လင်းမြင်သာရှိတဲ့.. အစိုးရတရပ်ဟာ.. အဲဒီအစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ.. တိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံး.. Deal. ညှိယူပေးနိုင်မယ်လို့.. ယူဆမိပါတယ်..။
( မှတ်ချက်။ ။ စစ်သားတွေ.. ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်… မလုပ်တတ်… မလုပ်သင့်..)
အနည်းဆုံး… မြစ်ဆုံဆည်ဆက်လက်ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို.. အနောက်နိုင်ငံတွေကို.. လွှဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့.. ဖက်က ကိုင်ပြီး.. Deal လုပ်ရင်.. ချိုင်းနားပြည်ဖက်က… အဖြေကောင်းကောင်းတခု ထုတ်ပေး..ညှိပေးလာမယ်လို့… ယူဆမိတယ်…။
အဓိက.. ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်က.. မြန်မာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး(ပြည်တွင်းစစ်) ဖဲချပ်ကို.. ချိုင်းနားက ကိုင်ထားပြီး.. ချိုင်းနားဆိုတာက.. ပထဝီအနေအထားအရ.. အိမ်နီးချင်းဖြစ်နေတာကို.. ငြင်းပယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့.. အချက်ပါ…။
အလောင်းအစား.. ကြေးသိပ်ကြီးပါတယ်လို့.. ဆိုလို…. :buu:
ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာ ဆောက်ပြီး ကိုယ်ပြည်သုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။
အခုတော့ သမင်မွေးရင်း နဂါးစားရင်း စီမံကိန်းတွေဆိုတော့လည်း အခက်သားလားဗျာ။
ကိုယ်တိုင်းပြည်ငွေမရှိလို့ သူစိုက်ဆောက်ပြီး ကနဦးအကျိုး မင်းစိုက်ငွေအကြွေးကျေအောင်ယူ ဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးဘူးလေ မြင်သာမြင် မကျင်ရဘဝမို့ မခံနိုင်ကြဘူး။
တကယ်တော့ ပြည်တွင်းဘဲပြန်သုံးစေတဲ့ လုပ်ငန်းပေးကန်ထရိုက်စနစ် ထွန်းကားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ထင်။
Deal လေ.. Deal ပေါ့…။
ယူအက်စ်မှာ.. ဒေါ်နယ်ထရမ့်က.. မက်ဟီကိုနဲ့ယူအက်စ်ကြား.. ပေ၅ဝလောက်မြင့်တဲ့ တံတိုင်းကာမှာလို့ပြောပြီးမဲဆွယ်တယ်…။
ကုန်ကျငွေ ၁ဝဘီလီယံ(ဘီလီယံဒေါ်လာ) အထက်ရှိတဲ့.. အဲဒီတံတိုင်းဆောက်ခငွေကို.. မက်ဟီကိုက.. ပေးရမယ်ဆိုပြီး.. တခါထဲပြောနေတယ်..။
ကျုပ်အမြင်ကတော့.. မက်ဟီကိုက.. ပေးလိမ့်မယ်..။
ထရမ့်က.. အင်မတန်တော်တဲ့.. စီးပွားရေးသမား…။ Deal အင်မတန်ကောင်းတဲ့သူ…။
မြန်မာပြည်မယ်… အင်မတန်တော်တဲ့.. ညှိနှိုင်းရေးသမားတွေရှိကိုရှိတယ်…။
ချိုင်းနားပြည်အတွက်.. ဒီလိုခေတ်မှာ.. ၁ဝဘီလီယံလောက်က.. ဘာမှမရှိ..။( မြန်မာပြည်အတွက်သာ.. တတိုင်းပြည်လုံးဂျီဒီပီရဲ့ ၆ပုံ၁ပုံ…။)
ပြောတတ်ဆိုတတ်ရင်.. အကုန်ပေးတယ်..။ ဒီထက်မက ပေးတယ်..။
မြန်မာဟာ.. အဲဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရလိုက်ရင်.. နောင်၁ဝနှစ်.. ၁ဝနှစ်…အတွင်း.. ဂျီဒီပီ အခုထက် ၂ဆ.. ၂ဆခုန်တက်မယ်လို့.. အာမခံရဲတယ်…။
အခွင့်အရေးဆိုတာကလည်း… ၂ခါ.. (၂ခါ) မလာ….
What If Donald Trump Does Get Mexico to Pay for the Wall? – The …
Apr 5, 2016 – What If Mexico Really Does Pay for Trump’s Wall? … Yes, in The Art of the Deal, Trump says he likes to “play to people’s fantasies.” But he also …
China က ကိုယ်က ျိုုး စီးပွား များလွန်းတယ်
သစ်တောတွေခုတ် – တရုတ်ကိုသယ်
မြေတူး – တရုတ်ကိုသယ်
တကယ်ဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်က ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်
ဆိုကတည်းက သူတို့ ဆက်လက်တည်ဆောက်ဖို့
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ဘာ့ကြောင့် ဆက်မဆွေးနွေးတာ လည်း
ဘာ့ကြောင့် အခုအစိုးရ အသစ်တက်မှ အတင်း
ဘာ့ကြောင့် တခြားဖြစ်နီုင်တဲ့ Option ကို မဆွေးနွေးပဲ
မြစ်ဆုံဆည်ကိုပဲ တစိုက်မတ်မတ် ဆောက်ချင်နေတာလည်း
အဲ့ဒီထဲမှာ တရုတ်ကို မယုံကြည်ရတာက အဆိုးဆုံးပါ
တောင်တရုတ်ပင်လယ် ကိစ္စ ကိုလည်း ကြည့်ပါ။
(သစ်တောတွေခုတ် – တရုတ်ကိုသယ်..) ပြန်တောင်းလို့ရမလား…။
(မြေတူး – တရုတ်ကိုသယ်..) ပြန်တောင်းလို့ရမလား…။
(သစ်ပင်အမြစ်တောင်းတူးပီး တရုတ်ကိုသယ်တယ်.. ) ပြန်တောင်းလို့ရမလား…။
ဖြစ်နိုင်ရင်လုပ်ဖို့.. မဖြစ်နိုင်ရင်မလုပ်ပဲ.. ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား.. အများဆုံးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.. တွက်ကြ..လုပ်ကြ..Deal ကြဖို့ပဲ…။
ဒီကိစ္စက.. ဒီအတိုင်းဆက်ထားလို့.. မဖြစ်ရေးချ.. မဖြစ်..။ ပိုပိုရှုပ်လာမယ်ဖြစ်သလို… ပြဿနာ.. ပိုပိုကြီးလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
Deal ဆိုတာမှာ.. စစ်တပ်လို.. စစ်သားများလို.. စစ်ဘောင်းဘီချွတ်များလိုသူများနဲ့ အကျိုးစီးပွားDeal လုပ်လို့မရဆိုတာ.. သာမန်နိုင်ငံရေးသမားလောက်ဆို.. သဘောပေါက်ကြပါတယ်..။
စစ်တပ်ဆိုတာက.. အနိုင်နဲ့အရှုံးပေါ်မှာ(သာ)အလုပ်လုပ်ရတဲ့.. မူလအခံရှိပြီးကိုး..။
အစိုးရသစ်.. NLD မှာက.. အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ မိတ်ဖက်မဟာမိတ်(ဆိုတဲ့) ဖဲချပ်လည်းကိုင်ထားသမို့…. ပိုပြီးလည်း ဘက်ညီပါတယ်..။ ကမ္ဘာကလေးစားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း.. ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေသမို့.. Deal တခု.. ဖြစ်နိုင်ချေလည်းရှိပါတယ်..။
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို.. ဖမ်းကိုင်လိုက်တာနဲ့.. မြန်မာပြည်လည်း.. ဘဝပျက်သလောက်ဖြစ်သွားမှာ.. အသေအချာပါပဲ..။
တကယ်လို့.. ချိုင်းနားက.. ဒေါ်လာ၁ဘီလီယံလောက်.. နယ်စပ်ကလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဆီ ပုံအောထည့်လိုက်ရင်.. ကိစ္စပြတ်ပါပြီ…။
ကချင်ပြည်နယ်ကို.. ပရော့စီဝါးနဲ့ ကောက်သိမ်းပြီး.. ရွေးကောက်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကချင်အစိုးရကို.. အထွေထွေမဲဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ခိုင်းလိုက်ရင်.. အဲဒီပြည်နယ်.. ဘယ်ဖက်ပါသွားမယ်ထင်ပါသလဲ…။
ဒီလိုရေးလို့.. ချိုင်းနီးစ်… အမုန်းတရားတွေတိုးလည်း.. တိုးတိုးပါပဲ..။
အမုန်းတရားက.. ပြုတ်စားလို့မှ မရတာကိုး…။ ခံစားချက်ဆိုတာ.. ကျော်စားလို့မှ မရတာကိုး..။ ဝမ်းမဝနိုင်တာကိုး..။
အင်း.. အနိစ္စ… ဒုက္ခ… အမြဲမရှိ..။
95.7% of Crimeans in referendum voted to join Russia – preliminary …
Mar 16, 2014 – Over 95 percent of voters in the Crimean referendum have answered ‘yes’ to the autonomous republic joining Russia and less than4percent of …
Case by Case ပြောရရင်တော့ မြစ်ဆုံမှာ မဟုတ်ပဲ
တခြး သင့်လေ ျာ်တဲ့နေရာမှ ဆောက် သင့်တယ်
မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေရယ် တိုင်းရင်းသား
အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ လုပ်လို့ရတဲ့ တစ်ချို့
ကိစ္စ တွေက ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မလွက်ဘူး
အထူးသဖြင့် ပြသနာပေါင်းစုံ ရှိနေတဲ့
အစိုးရ အသစ်အတွက် ပိုလို့ မလွယ်ဘူး
အချိန်တော့ စောင့်ရလိမ့် မယ်
အသိမမှားရင်.. ကချင် ကေအိုင်အေနဲ့တပ်မတော်နဲ့ ပြန်ချကြတဲ့..မူလအကြောင်းရင်းကြီးက.. မြစ်ဆုံလို့ခန့်မှန်းမိတယ်..။
ချိုင်းနားက.. အဲဒီနယ်မှာ ဆည်ဆောက်မှာကို.. KIAနဲ့ကြိုမညှိပဲ..ငွေမပေးပဲ.. ထ,မလုပ်ဖူးလို့သေချာမိတယ်..။
ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာ.. သူ့ပြည်နယ်မြေ သူပိုင်တာပဲ..။
မြစ်ဆုံကိစ္စကို.. မြန်မာပြည်က တခြားပြည်နယ်သားတွေ ဝင်စွက်ဖက်နေတာကိုကလည်း.. အလွန်..။
အမေရိကားမှာ.. နီဗားဒါးပြည်နယ် ကိုလိုရာဒိုမြစ်ပိတ်ပြီး ဆည်ဆောက်တာကို.. ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သားတွေက.. သွားကန့်ကွက်လို့မရ…။
မြစ်ကျေက.. ငါ့ပြည်နယ်ဖြတ်စီးနေလို့ဆိုပြီးလည်း.. ဆိုင်တယ်လို့လည်း ပြောမရ…။
မြစ်ဆုံပြဿနာမှာ.. အဓိကလက်သည်က.. ယူအက်စ်ပဲ..။
သူက.. လူထုဆက်ဆံရေး စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေး ကမ္ဘာတန်းအဆင့်ကျွမ်းကျင်သမို့.. ချိုင်းနားနဲ့မြန်မာပြည်ကြား.. တပါတ်လှည့်ထည့်ပေးလိုက်တာလို့ မြင်မိတယ်…။
(မယုံရင်.. Timeline ပြန်ဆွဲကြည့်)
ဘီလီယံစီမံကိန်းကနေ.. ဘိုချုပ်ကြီးတွေ.. ဥထား.. အုပ်ထားတဲ့..လာဘ်ငွေမည်းတွေသွားနေ..ရွေ့နေတာတွေမြင်နေတာလည်း.. ပါမယ်ပေါ့လေ…။
” မြစ်ဆုံကိစ္စကို.. မြန်မာပြည်က တခြားပြည်နယ်သားတွေ ဝင်စွက်ဖက်နေတာကိုကလည်း.. အလွန်..။”
မြစ်ဆုံ ကို ကန့်ကွက်တာ
” ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာ.. သူ့ပြည်နယ်မြေ သူပိုင်တာပဲ.. ”
မြန်မာနိုင်ငံက ဖယ်ဒရယ်စနစ် ဖြစ်နေပြီလား?
အဓိက ဖြစ်စေချင်တာက အားလုံး အလေ ျာ့ အတင်းလုပ်ဖို့ဘဲ
မြစ်ဆုံမှ မြစ်ဆုံဆိုတာကို ကိုင်မထားဖို့
အစိုးရ နဲ့ ပြည်သူကို သေသေချာချာ လေးလေးစားစား လုပ်ဖို့ဘဲ
KIA ကတော့ ကန့်ကွက်နေမယ်လို့မထင်.
ကချင်အများစုကလည်း. ကန့်ကွက်နေတယ်လို့.. မထင်ရေးချ.. မထင်..။
ချိုင်းနားက.. သေချာပေါက်.. အဲဒီဒေသကို.. ဝင်ညှိထားတယ်..။
ဒါကြောင့်လည်း.. KIA နဲ့ တပ်နဲ့.. ပြန်ချကုန်တာလို့.. timeline ပြန်ဆွဲကြည့်ရင်.. သိမယ်..။
ကချင်လက်နက်ကိုင်တွေ.. ငွေနဲ့လက်နက် ဘယ်ကရမလဲ.. တွေးကြည့်အသိသာကြီး..။
မြန်မာပြည်က.. ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကို သွားနေပါတယ်..။
အဲဒီအတွက်.. မြစ်ဆုံဟာ.. အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်တခုပဲ..။
လူတွေ အကြောက်ရေချိန်မြင့်နေတုံး.. ရှောင်သင့်တာပေါ့..
ဒါကြောင့်.. ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက.. နောက်အစိုးရဆီ ဘောလီဘောပုတ်လိုက်တာ..
နောက်အစိုးရကလည်း.. ဆက်ပုတ်ရင်တော့.. မြန်မာတွေဒီတသက်.. ထွက်လမ်းမမြင်…။
ဒါက.. ဖြေကိုဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စကြီး.. ရှောင်နေလို့မရ..။
တနေ့ကပဲ.. အင်ဂျင်နီယာတချို့နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်..။
ကယ်လီဖိုးနီးယားက.. ငလျှင်စကေး၉ အထိခံနိုင်အောင်.. ဘာဆောက်လုပ်ရေး.. ပိုက်လိုင်းလုပ်လုပ်.. ချိန်ဆ.. စံထားကြရတာတဲ့..။
မတော်.. ငလျှင်လှုပ်ပြီး.. ပြိုကျပျက်စီးကုန်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ.. လုပ်မလဲ..မေးကြည့်တော့…
နည်းပညာက ရှိပြီးဟာကို..ငလျှင်ကြောင့်… ပြိုကျပျက်စီးမယ်ဆိုရင်.. အဲဒီဆောက်တဲ့အဂျင်္င်နီယာ အသုံးမကျလို့ပေါ့တဲ့..။
ဝင်ပြီး ရကာတာပုံအောက်မှာ “ကြိုက်” ကိုနှိပ်ပေးပါရန်
Like (လက်မ ၊ထောင်တဲ့ပုံ)
307K Myitsone, Kwee Lay LIn မတိုင်မီတကြောင်း